Okuhlaza - I-Airbnb
Igumbi e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Giulia Angela
Sinezinsizakalo ezengeziwe ezifana nesidlo sasemini nesidlo sakusihlwa noma ukusebenzisa umshini wokuwasha kanye nezinsizakalo zobuhle nezokubhucunga futhi njalo ngezindleko ezengeziwe sihlinzeka ngokuvakashela i-comino kanye nezinto zokuhamba kanye nesidlo sasemini esipakishiwe.
Izindleko zentela yezivakashi ezokhokhwa endaweni lapho ufika ngu-€ 1.00 umuntu ngamunye ngobusuku
4.64 (izibuyekezo ezingu-11)
Sitholakala endaweni ethule, sinemibono emihle nezikhumbuzo okufanele sizivakashele ... Uma nje ungena eMġarr Harbour, usagibele isikebhe, uzobona ukuthi ezinye zezindawo zokwamukela amazwe zasethekwini lase-Għajnsielem, phezulu. egqumeni: Lourdes yesonto nge lwayo olucijile isicwebezelisi esivimba amanzi futhi Sanctuary Lady yethu Lourdes, Fort Chambrai ngakwesokunxele olusesandleni esibheke lwewa bese, ngokuqhubeka, le ezinde isicwebezelisi esivimba amanzi ka Għajnsielem lesifunda esontweni.
Igama elithi Għajnsielem lisho "umthombo othulile" futhi livela emthonjeni wamanzi okwathi ngawo, ngo-1700, u-Grand Master Perellos wakha uvulandi oqukethe izitsha zokugezela zomphakathi kanye nezihlambi zamanzi amasha.
Ukuvakashela e-Għajnsielem kufanele kuqale nge-Mġarr Harbour kanye nendawo yokudoba, kulandelwe isonto elincane le-Our Lady of Lourdes ukusuka lapho, ikakhulukazi ekushoneni kwelanga, kunombono omuhle wechweba.
I-Fort Chambrai yekhulu le-18 yayiklanyelwe ukuthi ibe iValletta kaGozo kodwa ayizange ifike kude. Kusukela ngaphandle kwezindonga, kunokubukwa okumangalisayo kwamawa aseningizimu ye-Gozo, i-Xatt l-Aħmar kanye nesiteshi esisenyakatho ye-Comino. Umgwaqo omazombezombe uholela e-Xatt l-Aħmar Bay nase-Mġarr futhi kukhona ukuhamba okuhle eduze neziqongo zamawa.
Maphakathi nedolobhana kukhona isonto elikhulu lesifunda, indawo engcwele yesitayela se-Lombard-Gothic enikezelwe ku-Lady of Loreto. Futhi eduze nesonto lesifunda elidala kanye ne-"Pjazza tad-Dehra" engaqondakali (Apparition Square) lapho kukholakala ukuthi i-Our Lady ikhulume no-Anglu Grech, umfundisi wendawo.
Okunye okufanele ukuvakashelwe esigodlweni esidala samaFrancisca kanye neBandla lika-St. Anthony of Padua futhi indawo eseduze nesigodlo inokuthula ngokumangalisayo futhi igcwele injabulo ngokubukwa okumangalisayo phezu komsele waseGozo - yinhle ikakhulukazi ekuseni noma ekushoneni kwelanga.
Ibungazwe ngu-Giulia Angela